Tafatafa tamin-dRojovola Bora – Politika
Home Tafatafa Tafatafa tamin-dRojovola Bora
« Nampiasain’ny mpanao politika ho fitaovana fampanan-karena tampoka ny toerana maha olom-boafidy »
Rojovola Bora, mpitsara sady mpikambana eo anivon’ny fikambanana Ilo Soatoavina
Ny momba ny hery hisongadina eny anivon’ny antenimierampirenena, ny isan’ny nirotsaka hofidiana, ny fandraisana andraikitry ny tanora… Manome antsika ny heviny ity mpitsara ity.
Manao ahoana ny fahitanao ireo karazan-kery politika misy ao anatin’ny fifidianana Solombavambahoaka ?
Voalohany indrindra, tsy azo hadinoina fa misy hery politika roa lehibe misongadina mandray anjara mavitrika amin’ity fifidianana ity,, dia ny vovonana Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina, izay mahazo laka satria manana kandidà maro; ary ny antoko Tim izay nanolotra kandidà izay tsy azo lazaina hoe vitsy ihany koa. Eo anatrehan’izany, tsy maintsy afototra amin’ny voka-pifidianana Filohampirenena farany teo ny fandinihana mba hahafahana mahazo an-tsaina ny mety ho tohin’ny raharaha. Etsy andaniny, tsy hahagaga noho izany raha manohy ny lalany mba hahazoana mametraka fahamafisam-pototra ara-politika ireo mpomba ny Filoha voafidy ary tsikaritra koa anefa etsy andaniny fa tsy manaiky ho mpitan-damba fotsiny ny Tim. Iaraha-mahalala koa fa efa nanjavona tanteraka teo amin’ny tontolo politika ny antoko HVM, nitana ny laharana fahatelo ary nibata salanisa maivamaivana ihany tamin’ny fifidianana Filohampirenena farany teo. Azo heverina noho izany, fa tsy hanano sarotra ny hahazoan’ny antoko eo amin’ny fitondrana ny maro an’isa mandritra ity fifidianana solombavambahoaka ity; satria ny fitambaran’ireo antoko samihafa ao anatin’ilay vovonana Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina, dia tsy maintsy hisy akony eo amin’ny voka-pifidianana, amin’ny maha fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fifidianana Filoham-pirenena sy ny an’ny Solombavambahoaka. Ny faharavan’ny antoko HVM, izay tsy nahay namondrona ny heriny koa anefa, dia nahatonga ny fihamaroan’isan’ireo kandidà tsy miankina.
Inona no heverinao ho nahatonga ny ny fahamaroan’ny kandidà tsy miankina ? Midika ho tsy ho fisian’ny « antoko madinika » na ny « antoko lehibe» intsony ve izany ?
Hita fa maro amin’ireo kandidà tsy miankina milatsaka ho fidiana no efa niaraka tamin’ny fitondrana teo aloha ary ao koa ireo mpisehatra politika izay te hisongadina tsotra izao mba hahafahany mampiseho fa mpanao politika manana ny maha izy azy izy. Tsy azo lavina koa anefa, fa misy ny endrika vaovao maneho fahavononana hirotsaka anatin’ny raharaham-pitantanam-pirenena. Ankoatra izay, azo antoka fa misy ny kilalao politika maloto ary tsy vitsy araka izany ireo kandidà entanin’ny tombontsoa manokana fotsiny,, satria raha jerena ny lalàna nodiavin’izy ireny dia tsy ahitana taratra ny faharesen-dahatra hikatsaka ny tombontsoa iombonana. Tsy zava-baovao intsony izany, satria efa fantatra hatramin’izay, fa ny fe-potoam-piasana vokatry ny fahalaniana tamin’ny fifidianana, dia nikendren’ireo mpanao politika hatrany izay hahamandimandina sy hampisondrotra azy ireo eo anivon’ny fiarahamonina. Noho izany, mety mihitsy ny hahafoana ireo antoko politika tsy manana foto-kevitra iorenana na ireo manana ihany saingy tsy afa-nanova ny fomba fitondran-tenany; satria izy ireo no namery hasina sy nampietry voninahitra izany asa maha solombavambahoaka izany. Antenaina fa hahay hampiakatra ambony ny ady hevitra eo anivon’ny antenimierampirenena ny tontolo politika vaovao hateraky ny fifidianana solombavambahoaka ho avy eo.
Mindangana loatra ve ilay saram-pirotsahana dimy tapitrisa ariary ?
Ny zava-misy no ndeha horaisina ho mizana enti-mitsara. Noho izany, raha jerena ny fitomboan’ny isan’ny kandidà tsy miankina mirotsaka ho fidiana, dia tsia ny valiny; indrindra fa raha maro ny olona afaka milatsaka amin’ny maha tsy miankina sy amin’ny volan’ny tenany manokana, dia azo lazaina fa tsy dia midangana loatra ilay izy. Tsy ny antoko araka izany no miantoka ny famatsiambolan’izy ireny fa ny tenany manokana, ka izay koa no ilazàna fa azo ihoriranana ilay saram-pilatsahana.
Manao ahoana ny fahitanao ny mety ho firafitry ny antenimierampirenena ?
Amin’ny demokrasia dia izao, maneho ny fahefany amin’ny alalan’ny olona nofidiany hisolontena azy ny vahoaka.Tsy maintsy hitoetra foana eo anivon’ny antenimiera anefa ny olana momba ny fahafaha-misolontena ireo ireo sokajin’olona maro samihafa eo anivon’ny fiarahamonina. Raha ny fampiakarana ny saram-mpirotsahan-kofidiana ihany mantsy no atao mason-tsivana farany kely mba hifantenana ireo kandidà te hirotsaka ho fidiana, dia ireo manan-katao ihany izany no afaka milatsaka ho fidiana; ary misarika ny saina hieritreritra izany, satria ny vahoaka izay milomano ao anatin’ny fahantrana dia tsy mba hahatsapa amin’ny olom-boafidy ny maha mpisolontena marina ny vahoaka azy ireo: olona akaiky sy mihaino ny vahoaka ary mahafantatra ny hetahetam-bahoaka. Manaraka izany, vitsy amin’ireo manampahaizana no milatsaka ho fidiana; ary farany, ho sarotra amin’ny valala tsy mandady harona ny hiantehatra amin’ny solombavambahoaka raha toa ka misomaritaka ny asa sahanin’izy ireo. Mbola mitoetra ho olana ka tsy hahazoan’ny olom-pirenena mifidy amim-piheverana mandritra ny fifidianana solombavambahoaka hatreto ny famaritana ny amin’ny tena andraikitry ny parlemantera. Tsy azo lavina mantsy fa maro amin’ny olom-pirenena no tsy mihevitra intsony, fa ny solombavambahoaka dia mpitondra ny hetahetam-bahoakahetahetam-bahoaka raha mbola ny tombontsoa manokany no masaka ao an-dohany.Mampalahelo ihany koa, fa ny manampahaizana malagasy dia tsy sahy miatrika fifidianana sy mifanehitra amin’ny mpifidy. Raha fintinina, tsinjoko sahady fa ny antenimiera vaovao hijoro eo, dia tokony hametraka fanamby hitondra fanovàna hatrany ifotony ny fomba fanaovana politika mba hamerenana ny hasin’ny antenimieram-pirenena..
Maro amin’ny tanora no nirotsaka hofidina solombavambahoaka. Ahoana ny fahitanao izay fahavitrihana ananan’izy ireo izay ?
Tadidio fa harena ho an’ny firenena iray ny tanora, satria izy ireo no antoky ny ho avy, hery sy angovo vao mbola afa-mivoatra sy mihatsara. Mahafinaritra ahy ny fandraisan’anjaran’ny tanora amin’ny sehatra politika, indrindra raha tena entanin’ny finiavana hitondra rivo-baovao sy entanin’ny etikam-pitondran-tena politika izy ireo amin’izany.
Nanangona Raoto Andriamanambe
Antenimierampirenena, Antoko politika, Rojovola Bora, Solombavambahoaka
Previous ArticleFanitsiana ny rafi-panjakana, manjavozavo ny momba ireo antenimieraNext ArticleL’initiative de loi confisquée par l’Exécutif